AHOANA NY FOMBA HANAFENANA RAKITRA, SARY ARY HORONAN-TSARY AMIN'NY ANDROID (2021) - MALEMY
Ahoana ny fomba hanafenana rakitra, sary ary horonan-tsary amin'ny Android
Ilay galeriana angamba no toerana lehibe indrindra amin'ny telefaonin'iza. Miaraka amin'ny sarinao sy ny horonan-tsary rehetra misy anao, dia misy antsipiriany manokana momba ny fiainanao io. Ankoatr'izay, ny fizarana rakitra dia mety misy koa tsiambaratelo tsiambaratelo izay tianao tsy hozaraina amin'olona. Raha mitady fomba hampiakarana ny fizarana tsiambaratelo ao anaty telefaoninao ianao ary hanafenana ireo rakitra, sary ary horonan-tsary amin'ny Android, dia eo amin'ny toerana mety ianao. Amin'ity lahatsoratra ity dia hitondranay anao amin'ny alàlan'ny fomba maro ahafahanao manafina zavatra amin'ny findainao tsy misy olana ianao. Noho izany, tohizo hatrany ny famakiana.
Mamorona toerana manokana hitahirizana fampahalalana tsiambaratelo
Afeno ireo rakitra, sary, ary horonan-tsary amin'ny Android miaraka amin'ny fitaovana Native
a) Ho an'ny Smartphone Samsung
b) Ho an'ny Smartphone Smartphone
c) Ho an'ny Smartphone Xiaomi
d) Ho an'ny Smartphone LG
e) Ho an'ny Smartphone OnePlus
Afeno ny Media amin'ny .nomedia
Afeno ao anaty lahatahiry ny sary sy ny haino aman-jery tsirairay
Mampiasà fampiharana antoko fahatelo hanafenana rakitra
Misy fampiharana sy safidy maromaro hanafenana zavatra sasany amin'ny findainao. Na izany aza, ny vahaolana feno sy tsy misy fotony dia ny fanaovana Private Space amin'ny telefaoninao. Fantatra amin'ny hoe Space faharoa amin'ny telefaona sasany, ny safidy Private Space dia mamorona kopian'ny OS-nao izay misokatra miaraka amin'ny teny miafina hafa. Ity habaka ity dia hiseho toy ny vaovao tanteraka tsy misy mariky ny hetsika. Azonao atao ny manafina rakitra, sary, ary horonan-tsary amin'ny telefaona Android anao amin'ny alàlan'ity habaka manokana ity.
Ny dingana hamoronana Private Space dia tsy mitovy amin'ny telefaona avy amin'ireo mpanamboatra isan-karazany. Na izany aza, ity manaraka ity dia làlana iray iraisana mahazatra ahafahana mamela ny safidy ho an'ny habaka manokana.
1. Mandehana any amin'ny Menu fanovana amin'ny findainao.
2. Tsindrio ny Fiarovana sy tsiambaratelo safidy.
3. Eto, ho hitanao ny safidy mamorona sehatra tsy miankina na habaka faharoa.
4. Rehefa tsindrio ilay safidy dia ho voatarika ianao mametraha teny miafina vaovao.
5. Raha vao mampiditra ny teny miafinao ianao, hoentina any amin'ny kinova vaovao an'ny OS ianao .
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hanafenana hafatra an-tsoratra na SMS amin'ny Android
Na dia manome anao fahalalahana hanao zavatra tsy misy fanahiana amin'ny sehatra iray aza ny Private Space, dia mety ho manahirana ho an'ny mpampiasa sasany izany. Marina izany, indrindra raha ny manafina sary vitsivitsy fotsiny amin'ny galerianao. Raha izany no izy, dia misy safidy hafa mora kokoa ho anao. Voaresaka etsy ambany ny fitaovana natiora vitsivitsy ho an'ny finday samihafa izay ahafahanao manafina rakitra sy media.
Samsung finday dia miaraka amin'ny endri-javatra mahavariana antsoina hoe ny Folder azo antoka hitazonana miafina ireo antontan-drakitra voafantina. Mila misoratra anarana amin'ity rindranasa ity fotsiny ianao ary afaka manomboka manomboka avy eo. Araho ireto dingana ireto hampiasana an'ity endri-javatra ity.
1. Amin'ny fandefasana ny rindrambaiko Secure Folder namboarina, tsindrio ny Add Files safidy amin'ny zoro ankavanana.
2. Misafidiana rakitra maromaro karazana izay rakitra tianao ho afenina.
3. Safidio ny rakitra rehetra avy amin'ny toerana samihafa.
4. Raha vantany vao nanangona ny rakitra rehetra tianao hotafenana ianao, dia tsindrio ny bokotra Vita.
Safidy mitovy amin'ny Samsung's Secure Folder no hita ao amin'ny telefaonin'i Huawei ihany koa. Azonao atao ny mametraka ny rakitrao sy ny media ao amin'ny Safe amin'ny findainao. Ireto dingana manaraka ireto dia hanampy anao hanatanteraka izany.
1. Mandehana any amin'ny Settings amin'ny findainao.
2. Mizotra mankany amin'ny Safidy fiarovana sy tsiambaratelo.
3. Eo ambanin'ny Security & Privacy, kitiho ny File Safe safidy.
Fanamarihana: Raha sambany manokatra fampiharana ianao, dia mila ampidiro ny Safe.
windows 10 tsy mamaly aorian'ny fanombohana
4. Raha vantany vao tafiditra ao amin'ny Safe ianao, dia ho hitanao ny safidy Ampio Files eo ambany.
5. Safidio aloha ny karazana fisie ary atombohy ny fikitihana ireo rakitra rehetra tianao afenina.
6. Rehefa vita ianao dia tsotra kitiho ny bokotra Add, ary vita ianao.
Ny fampiharana File Manager amin'ny telefaona Xiaomi dia hanampy amin'ny fanafenana rakitra sy lahatahiry. Amin'ireo fomba maro hahatonga ny angon-drakitra tsiambaratelonao hanjavona amin'ny telefaonao, io zotra io no tena tianao indrindra. Araho ireto dingana ireto hanafenana ny atiny tadiavinao.
1. Sokafy ny Fampiharana File Manager.
2. Tadiavo ireo rakitra izay tianao afenina.
3. Amin'ny fitadiavana ireo rakitra ireo dia afaka tsotra fotsiny ianao tsindrio maharitra hahitanao ny safidy More.
4. Ao amin'ny safidy More, ho hitanao ny Manaova bokotra manokana na miafina.
5. Amin'ny fanindriana an'ity bokotra ity dia hahazo prompt ianao ampidiro ny teny miafin'ny kaontinao.
Amin'izany dia ho takona ireo rakitra voafantina. Raha tsy hampidirina na hidirana amin'ny fisie indray dia azonao atao ny manokatra ny vault miaraka amin'ny teny miafina.
Raha tsy izany, ny telefaona Xiaomi dia tonga miaraka amin'ny safidy hanafenana haino aman-jery ao anatin'ny fampiharana galeriana ihany. Safidio ny sary rehetra tianao afenina ary ampidiro ao anaty fampirimana vaovao. Tsindrio lava eo amin'ity fampirimana ity hahitana ny safidy Hide. Amin'ny fipihana ity dia hanjavona eo noho eo ilay fampirimana. Raha te hiditra amin'ny fampirimana indray ianao dia mandehana any amin'ny toeran'ny galeriana amin'ny fipihana ireo teboka telo eo amin'ny zoro ambony ambony. Tadiavo ny safidinao Hijery Albums Hidden hijerena ireo lahatahiry miafina ary avy eo ampidiro raha tianao.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hanafenana ny nomeraon-telefaona anao amin'ny Caller ID amin'ny Android
Ny fampiharana galeriana amin'ny finday LG dia misy fitaovana hanafenana sary na horonan-tsary ilaina. Izy io dia somary mitovy amin'ireo fitaovana miafina hita amin'ny telefaona Xiaomi. Tsindrio lava ny sary na horonan-tsary tianao ho afenina. Hanana safidy hanidiana ny fisie ianao. Izany dia mitaky fisafidianana isam-batan'olona amin'ny rakitra hafa. Avy eo ianao dia afaka mandeha any amin'ny fikirana ao amin'ny galerian'ny telefaoninao ary mahita ny safidy Show Locked Files hijerena azy ireo indray.
Ny telefaona OnePlus dia tonga miaraka amina safidy mahavariana antsoina hoe Lockbox hitandrina ny atiny ho azo antoka sy azo antoka. Araho ireto dingana mora ireto hidirana amin'ny Lockbox ary handefasa rakitra ao amin'ity vault ity.
2. Tadiavo ny fampirimana izay misy ireo rakitra tianao.
3. Tsindrio lava ny rakitra (s) fa te hanafina ianao.
4. Amin'ny fisafidianana ireo rakitra rehetra, tsindrio ireo teboka telo eo amin'ny zoro ambony ambony.
5. Ity dia hanome anao ny safidy Mifindra amin'ny Lockbox.
Ny safidy etsy ambony dia mety amin'ny toe-javatra ahafahanao misafidy tanana ny rakitra sy horonan-tsary tianao ho afenina. Raha te hanafina sary sy horonan-tsary be dia be ianao, dia misy safidy hafa amin'ny alàlan'ny famindrana rakitra amin'ny PC na laptop. Matetika mitranga ny mozika sy horonan-tsary dia misintona ny galeran'ny olona misy sary tsy ilaina. Ny WhatsApp koa dia mety ho ivon'ny media sosialy. Noho izany, azonao atao ny mampiasa ny safidy famindrana rakitra hanafenana ireo haino aman-jery rehetra ireo amin'ny dingana mora vitsivitsy.
1. Ampifandraiso amin'ny solosainao na findainao ny findainao.
2. Safidio ny safidy famindrana rakitra rehefa voatosika.
3. Mandehana any amin'ny toerana / lahatahiry tianao hanafenana ny haino aman-jery.
4. Mamorona rakitra an-tsoratra foana .nomedia .
Izany dia hanafina amin'ny fomba mahagaga ny rakitra rehetra sy ny media tsy ilaina amin'ny lahatahiry sasany amin'ny findainao. Raha tsy izany, azonao atao ny mampiasa ny .nomedia tetikady rakitra na dia tsy misy ny safidy famindrana rakitra aza. Forony fotsiny ity rakitra ity ao anaty lahatahiry misy rakitra sy haino aman-jery tianao afenina. Aorian'ny famerenanao ny telefaoninao dia ho hitanao fa nanjavona ilay fampirimana. Raha te hahita ireo rakitra miafina sy haino aman-jery miafina rehetra dia azonao atao ny mamafa fotsiny ilay .nomedia rakitra avy amin'ny lahatahiry.
Azonao atao ny mampiasa ny safidy etsy ambony hanafenana sary sy horonan-tsary vitsivitsy napetraka. Ireo dingana dia saika mitovy amin'ireo ho an'ny fomba famindrana rakitra. Ilaina io safidy io ho an'ny olona izay tsy te-hanana risika handatsaka tsy ampoizina ny tsiambaratelony isaky ny manolotra ny findainy amin'ny olon-kafa.
2. Safidio ny safidy famindrana rakitra rehefa avy voatsindrina.
Ahoana ny fomba hampijanonana ny fanavaozana ny tranokala Windows 10
3. Tsindrio ny folder DCIM raha vantany vao ao anaty telefaona ianao.
4. Eto, manaova fampirimana mitondra ny lohanteny .hidden .
5. Ao anatin'ity fampirimana ity dia manaova rakitra an-tsoratra tsy misy dikany .nomedia.
6. Ankehitriny, alaivo tsirairay ny sary sy horonan-tsary tianao ho afenina ary apetraho ao amin'ity fampirimana ity izy ireo.
Na dia misy aza ny vahaolana azonao ampiasaina amin'ny tanana, fampiharana maromaro no mandeha ho azy ny asa. Ao amin'ny fivarotana fampiharana ho an'ny telefaona Android sy iOS, dia hahita rindrambaiko tsy manam-petra namboarina hanafina na inona na inona ianao. Na sary izany na fisie na fampiharana iray, ireo apps miafina ireo dia mahavita manala na inona na inona. Voatanisa etsy ambany ny sasany amin'ireo fampiharana azonao andramana afenina ny rakitrao sy ny media misy anao amin'ny finday Android.
KeepSafe Photo Vault dia raisina ho isan'ireo fampiharana tsiambaratelo farany ambony namboarina ho arovana fiarovana an'ireo haino aman-jery tsiambarateloo. Iray amin'ireo fiasa mandroso kokoa ny fampandrenesana fitsaharana. Amin'ny alàlan'ity fitaovana ity, maka sary ilay mpiditra manandrana miditra an-tsokosoko ilay fampiharana. Azonao atao ihany koa ny mamorona PIN sandoka izay hisokafan'ny fampiharana tsy misy angona na hanafina azy rehetra miaraka amin'ny alàlan'ny safidy Secret Door. Na dia maimaim-poana misintona sy mampiasa azy io aza dia misy amin'ny endri-tsoratra Premium ny fiasa sasany ao aminy.
Rindrambaiko tsara hafa hanafenana sary dia LockMyPix Photo Vaul t . Namboarina tamina rafitra fiarovana matanjaka, ity rindrambaiko ity dia mampiasa ny fenitra encryption AES ambaratonga miaramila hiarovana ny angona angonao. Miaraka amin'ny mpampiasa interface intuitive, mora ny mizotra amin'ny fanafenana ireo rakitra tsiambarateloo. Toa an'i KeepSafe, ity fampiharana ity dia miaraka amin'ny safidy fidirana sandoka. Ankoatr'izay, manakana ny mpampiasa tsy handray sary koa izy io. Ny sasany amin'ireo fampiasa ireo dia misy amin'ny kinova maimaimpoana raha ny sasany kosa mila famandrihana premium.
3. Afeno zavatra
Afeno zavatra dia rindrambaiko freemium iray hafa hanafenana ireo rakitrao haino aman-jery. Manana fisintomana mihoatra ny 5 tapitrisa izay manamarina ny haavon'ny fahatokisan'ny mpampiasa azy. Ny rindrambaiko sy ny fivezivezena maimaim-poana amin'ny fampiharana dia azo antoka fa iray amin'ireo antony mahatonga ny lazany. Azonao atao ny misafidy safidy ho an'ny lohahevitra hanamboarana ny fampiharana. Ny endri-javatra mandroso dia misy ny manafina ny fampiharana avy amin'ny lisitra izay nampiasaina vao haingana mba hitazomana ny tsiambaratelo farany. Izy io koa dia mametaka ireo rakitra rehetra tazominao ao anaty tranokala amin'ny rahona voafantina rehetra.
File Hide Expert fampiharana dia natao hanafenana ireo rakitra tianao hotahirizina. Aorian'ny fisintomana an'ity app ity amin'ny Play Store, azonao atao ny manindry bokotra Folder eo amin'ny zoro havanana ambony mba hanombohana hanafina rakitra. Safidio ny toerana misy ireo rakitra tianao ary safidio foana ireo tianao hotafenana. Ity rindrambaiko ity dia manana rindrambaiko tsy misy dikany izay toa tena fototr'asa nefa mora ihany no manao ilay asa.
Ahoana ny fomba hanafenana rakitra sy fampiharana amin'ny Android
Fomba 3 hanafenana ireo fampiharana amin'ny Android tsy misy faka
Fafao hatrany ny hafatra amin'ny Facebook Messenger amin'ny lafiny roa
Miaraka amin'izany dia tonga amin'ny faran'ny lahatsoratra isika. Manantena izahay fa nanampy ity lahatsoratra ity ary afaka ianareo afeno ny rakitra, sary ary horonan-tsary amin'ny Android . Ilaina amin'ny tsiambaratelo ho an'ny mpampiasa finday maro ny tsiambaratelo. Tsy afaka matoky olona amin'ny telefaoninao fotsiny ianao. Ny tena zava-dehibe dia matetika misy atiny sasany izay tsy azonao zaraina amin'ny hafa mihitsy. Ankoatr'izay, ny mpampiasa sasany maniry ny hihazona ny rakitra sy haino aman-jery tsy miovaova amin'ny sakaizany manodidina azy ireo. Ireo vahaolana sy fampiharana voalaza etsy ambony dia mety indrindra aminao raha tianao ny hahatanteraka izany.
ny teny miafina miaro ny kapila mangirana ivelany Windows 10
chrome windows 10 tsy mandeha